२५ बर्षिय नितु आफ्नै आमा बुवाको अघि आएर उभिदा बेहोस भै ढले, घटना भयो अचम्मैको ! – " सुलभ खबर "
२५ बर्षिय नितु आफ्नै आमा बुवाको अघि आएर उभिदा बेहोस भै ढले, घटना भयो अचम्मैको !
एजेन्सी । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ काेही म*रिसकेकाे ब्यक्ती फेरी हिँड्दै हिँड्दै घर फर्कियाे भन्दा कुनै फिल्मकाे दृश्यमा जस्तै लाग्ने एउटा समाचार बाहिरिएकाे छ । भारतीय सञ्चार माध्यम अाजतकले लेखेकाे समाचार अनुसार नोएडामा एक २५ बर्षिय महिलासँग यस्तै अचम्मको
घटना घटेको छ । परिवारले उनलाई म*रेको सम्झेर दाहासंस्कार गरिदिएको थियो । तर २७ दिनपछि उनी हिडदै घर आईन । परिवारलाई यो निक्कै ठुलो आश्चर्यको बिषय बनेको थियो । पहिले त उनका अभिभावकलाई विश्वास लागेको थिएन जस्को उनीहरुले दाहसंस्कार गरेका थिए उनै अगाडि आउँदा की यो तिनै नीतू हुन् भनि जस्ले सास लिदै थिईन र जिउँदो थिईन् ।
घटना यस्तो थियो केहि दिन अघि नीतू आफ्नो घर देखी हराईन् । परिवारले प्रहरीमा निवेदन दिए । प्रहरीले नीताको श्रीमान् राम लखनमाथि शंका गर्‍यो । पछि प्रहरीले राम लखनलाई दोषी पाएन । नीतूको परिवारलाई एउटा मृ*त शरीर देखाए जुन नोयडाको सेक्टर ११५ मा भेटेका थिए जस्को शरीर पुरै डढेको थियो । परिवारलाई उक्त शरीर नीतूको जस्तोलागेको थियो । प्रहरीले डिएनए स्याम्पल नजाँची सहजै सो श व दिएको थियो ।
परिवारले अन्तिम संस्कार गरेको थियो । तै पनि प्रहरीले सत्य पत्ता लगाउन घटनाको अनुसंधान गरिरह्यो । पछि प्रहरीले यो पत्ता लगायो की नीतू एटामा बस्ने एक व्यक्ति पुरणसँग बस्दै छ भन्ने । नीतू त्याहाबाट ५ तारिख भागेको पनि पत्ता लाग्यो । नीतू परिवार भएको ठाँउमा पुगिन । अहिले प्रहरी जस्को दाहसंकार भएको थियो उस्को पहिचान गर्न अनुुुसंधानरत छन् ।
चिनियाँ युवतीको श व कफिनसहित हराएपछि सनसनी मच्चिएको छ । चिहानबाट युवतीको श व हराउनुमा त्यहाँ प्रचलित ‘भूत विवाह’ को आशंका गरिएको छ ।मिंघम’ वा ‘आत्मा विवाह’ का रुपमा चिनियाँहरु श वसँग विवाह गर्छन् । श वसँग विवाह गर्दा जीवनभर मात्र नभईनिधनपछि पनि शान्ति मिल्ने चिनियाँ विश्वास छ । विशेषगरी नवविवाहित वरबधुमध्ये एकको अचानक निधन हुँदा वा पहिलो सन्तान म र्दा त्यस्तो विवाह गरिन्छ ।
१८ वर्षको उमेरमै बितेकी ती युवतीको श व त्यस्तै विवाहका लागि चोरिएको हुन सक्ने आफन्तको धारणा छ । झन्डै दुई दशकअघि चि हानमा गा डिएकी युवती हराएपछि आफन्त भावविह्वल छन् । भन्छन्, ‘उनको कफिनमा त्यस्तो मूल्यवान वस्तु केही पनि थिएन ।’
आफन्तका अनुसार केही समयअघि एक मानिस भूत विवाहका लागि युवतीको श व खरिद गर्न घरमै आएका थिए । तर उनीहरुले मानेनन् । यसअघि सन् २०१५ मा साङसी प्रान्तस्थित एक गाउँको चिहानबाट १४ महिलाका श व चोरी भएको बीबीसीले जनाएको छ ।चिनियाँ प्रहरी कफिनसहित हराएको श वको खोजीमा लागिपरेको विदेशी सञ्चार माध्यमले लेखेका छन् । सन् २००६ को अगस्तमा चीनले आधिकारिक कानुन ल्याएर श व किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
लस एन्जलस, १३ मंसिर । अमेरिकाको लस एन्जलसमा घरमै बस्नुपर्नेलगायतका प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाहरुको घोषणा गरिएको छ
अमेरिकामा दुई लाख ७० हजार बढी संक्रमितको मृत्यु
विराटनगर, १३ मंसिर । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा हालसम्म दुई लाख
राखी सावंतले भनिन्,‘आर्टिस्ट मात्रै किन ? मन्त्रीका छोराहरु पनि समातिनु पर्ने हो ड्र’ग्स केसमा’
एजेन्सी । बलिउडकी आ’ईटम डान्सर राखी सावंतले एनसीबीलाई प्रश्न गरेकी छन् । उनले ड्र ‘ग्स
बाइडेनले जितेको प्रमाणित गरे ह्वाइट हाउस छाड्छु : ट्रम्प
काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इलेक्टोरल कलेजले आफ्ना प्रतिस्पर्धी जो बाइडेनले जितेको प्रमाणित गरेमा
भोलीको राशिफल हेर्नुहोस : वि.सं.२०७७ साल मंसिर १४ गते । आईतबार । ईश्वी सन् २०२० नोभेम्बर २९ तारिख